Maqaallada ugu dambeeyay: Gorgias: Cabbir Saamaynta Dakhliga Adeegga Macmiilka Ecommercega
Maqaallada ugu dambeeyay: Si ay u soo jiidato saxiixyada iimaylka, daabacayaashu waa inay ku caddeeyaan kartidooda shakhsiyaynta ee saxeexyada macnaha guud
Zara Ziad waa falanqeeye suuqgeyn wax soo saar ah Jaranjarada Xogta asal ahaan IT-ga. Waxay aad u xiiseysaa naqshadaynta istiraatijiyad ka kooban hal-abuur leh oo iftiiminaysa arrimaha nadaafadda xogta dhabta ah ee adduunka ee ay wajahayaan ururo badan maanta. Waxay soo saartaa nuxur si ay u gudbiso xalalka, talooyinka, iyo dhaqamada ka caawin kara ganacsiyada in ay hirgeliyaan oo ay gaadhaan tayada xogta asaasiga ah ee hababka sirdoonka ganacsigooda. Waxay ku dadaashaa inay abuurto maaddooyin lala beegsanayo dad badan oo dhegaystayaal ah, kuwaas oo u dhexeeya shaqaale farsamo ilaa isticmaale-dhameedka, iyo sidoo kale suuq-geynteeda qaybaha kala duwan ee dhijitaalka ah.
Maqaallada ugu dambeeyay: Waa maxay sababta Nadiifinta Xogta ay Muhiim u tahay iyo Sida aad u Fulin karto Hababka iyo Xalka Nadaafadda Xogta
Maqaallada ugu dambeeyay: Xeeladaha Mawduuca Habboon ee CMO-yada si loo yareeyo Wasakhowga Dijital ah
Prasanna waa khabiirka sare ee SEO ee Falanqaynta Express. Khibrad u leeyahay waa SEO, Warbaahinta Bulshada, Blogging, Maaraynta Sumcada khadka tooska ah, Xayeysiiska Google, iyo Hagaajinta Fiidiyowga YouTube.
Maqaallada ugu dambeeyay: Sida Suuqgeeyayaasha iimaylka ay u Isticmaalaan Falanqaynta Saadaasha si ay u horumariyaan Natiijooyinkooda Ecommerce
Paul Childs waa khabiir xayaysiis ah oo leh in ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo ah dhisidda iyo kobcinta ganacsiyada xayaysiisyada mobaylada caalamiga ah ee booska barnaamijka ee dhinacyada baahida iyo saadka. Waxa uu soo qabtay jagooyin badan oo hogaamineed oo sare heerarka VP iyo C oo ku saabsan horumarinta ganacsiga, hawlgallada, iibinta, iyo suuqgeynta. Paul wuxuu wax ka aasaasay Adfonic 2008, kaas oo u sii socday inuu noqdo mid ka mid ah hormuudka DSP-yada mobilada adduunka. Dhawaanahan, Paul wuxuu ahaa Madaxa Xafiiska Dakhliga ee Smadex, halkaas oo uu ka caawiyay koritaanka iyo ka bixitaanka ganacsiga Entravision. Paul hadda waa VP Horumarinta Ganacsiga MOLOCO.
Maqaallada ugu dambeeyay: Ku laabo Sizzle: Sida Suuqgeeyayaasha E-Ganacsiga ay u Isticmaali karaan Hal-abuur si ay u Kordhiyaan Soo-noqoshada
Vaibhav waa aasaasaha Qoraaga casriga ah. Waxaan ka caawiyay dhisitaanka shirkado badan oo malaayiin doollar ah waxaanan jeclahay inaan u dhawaado Start Ups iyada oo loo marayo kobaca hogaaminta alaabta
Maqaallada ugu dambeeyay: Hagaha Si Fudud Loogu Helo Dib-u-Xiriirinta Dhabta Ah Iyo Darajooyinka Google-ka Isticmaalka AI
Maqaallada ugu dambeeyay: Sheekooyinka Shabakadda Google: Hagaha Waxqabadka leh ee Bixinta Waayo-aragnimada Immersive Si Buuxda ah
Maqaallada ugu dambeeyay: Suuqgeynta Cloud: Sida Loo Sameeyo Automation Istuudiyaha Automation-ka si loogu soo dejiyo Xiriirada SMS MobileConnect
Maqaallada ugu dambeeyay: Maxay tahay sababta Maqalka Ka-baxsan Guriga (AOOH) uu gacan uga geysan karo ka-beddelka Ku-siyada Qolalka Saddexaad
Maqaallada ugu dambeeyay: Saddex nooc oo loogu talagalay Xayeysiiska Warshadaha Safarka: CPA, PPC, iyo CPM